‘बमे’ अब ‘बमकाजी ’ | Jukson
आरोहण गुरुकुलमा नाटक हेर्न पुग्ने दर्शकका लागि त सौगात मल्ल ‘हाकु काले’ बन्नुअघि नै गतिला ‘एक्टर’ थिए । तर उनलाई मासमा ‘हिरो’ बनाउने काम ‘लुट’ ले गरिदियो । त्यसपछि ‘हाकु काले’ चरित्रकै कारण बढी चिनिन पुगेका उनीबाट दर्शकले ठूलो अपेक्षा राखे । पैसाभन्दा राम्रो चरित्रका लागि फिल्म खेल्ने स्वभावका भए पनि सौगातको छनोट त्यसपछि ठाउँमा परेन । फिल्महरू लगातार असफल भए । हाकु कालेका फ्यानलाई सन्तुष्टि दिन उनी चुकिरहे ।
अहिले भने सौगात ‘कबड्डी कबड्डी’ मा बमकाजीको चरित्र बोकेर दर्शकमाझ आएका छन् । यसबाट आशावादी पनि छन् उनी । भन्छन्, ‘यस फिल्ममा मलाई मजा भयो । आफ्नै ग्रुप भएपछि रमाइलो त भयो नै, फिल्म पो कस्तो भयो भन्ने हो ।’ सौगात ढुक्क भने छैनन् । बरु फिल्म निर्देशक रामबाबु गुरुङ बमकाजीप्रति निश्चिन्त छन् । उनले ‘कबड्डी’ को काजीलाई टक्कर दिनैका लागि ‘कबड्डी कबड्डी’ मा बमकाजी भित्र्याएका हुन् ।
‘बमकाजी चरित्र यस्तो हो, जसले काजीलाई राम्रै टक्कर दिनुपथ्र्यो’ सौगातको चरित्रबारेमा पटकथा लेखकसमेत रहेका रामबाबु खुले, ‘बमकाजी चरित्रको ग्रो अप गर्ने क्रममा मलाई ‘जात सोध्नु जोगीको’ नाटकको बमेले राम्रैसँग प्रभावित गरेको हो । अनि कलाकार र प्रस्तुतिको हिसाबले सौगातलाई नै दिमागमा राखेर लेख्न थालेको हुँ । बमेको चरित्रमा पनि उनै सौगातले अभिनय गरेकाले रामबाबुलाई ‘कबड्डी कबड्डी’ को बमकाजीमा उनैलाई लिनु थियो । तर बमकाजीको चरित्र नै
ठ्याक्कै बमेको भने हैन भन्छन् रामबाबु । ‘त्यसको र यसको चरित्रचाहिंं धेरै नजिक छ । त्यसैले पनि उसलाई नमान्दा नमान्दै पनि जबरजस्ती कास्टिङ गरिएको हो,’ उनले खुलाए ।
सौगातको इन्ट्रीले ‘कबड्डी कबड्डी’ को रौनकता थपेको छ । यसअघि दयाहाङ राई अभिनीत काजीको चरित्रलाई टक्कर दिने ‘कबड्डी’ मा त्यस्तो बलियो उम्मेदवार कोही थिएन । काजीकी सोल्टिनी मैयाँ ‘हडप्न’ आइपुगेका हुन् बमकाजी । अन्तर्मुखी स्वभावका सौगातलाई भने नायिकासँग रसरंग र नाचगानले भने औडाहा पार्छ । सुटिङमा कत्तिको असहज भए होलान् त सौगात ? जवाफमा उनी बोले, ‘मलाई मन नलागेको चीज गर्दा गाह्रो हुने हो । तर यसमा त्यस्तो लभमै जाने खालको पनि थिएन । मस्किनुपर्ने खासै थिएन । त्यस्तो गाह्रो भएन ।’ बरु रामबाबुले नै जिस्काइदिए, ‘तर त्यस्तो असहज मानेजस्तो त लाग्थेन । हाँस खेल गरिरहेका थियौ । चाहेको भन्दा बढी दिइरहेको थियौ त ।’ सौगातलाई टिमको यस्तै हाँस खेल मन पर्दो रहेछ । जसले गर्दा फिल्ममा खेल्न पनि राजी भए । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा त टिमै हो जहाँ सबै साथीहरू छन् । यो टिममा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको छ । मेरा लागि विशेष नै यही हो,’ सौगातले भने । तर उनले ‘कबड्डी’ मा आफू नहुनुको खल्लो अनुभव भने नगरेको बताए ।
हाकु कालेपछि सेलाएको सौगातको करिअरलाई अब बमकाजीले कत्तिको काँध थाप्ला ? अनि ‘कबड्डी कबड्डी’ मा नयाँ खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध भएका उनले फिल्मलाई सफलताको स्वाद चखाउने हुन्, होइनन् ? मूल्यांकन सुरु भइसकेको छ ।
को बन्ला ‘सुरताल –२’ को विजेता ?
सिरहामा शृङ्खलाबद्ध तीन जनाको हत्या
वर्षकै सफल चलचित्र बन्यो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स